रासायनिक मल अभाव - News @ NepalUpclose.com
खेती लगाइसकेपछि बल्ल आयो डिएपी मल Jul 30, 2012.
बुटवल, साउन१५ - भारतबाट ल्याइएको मल भैरहवा आइपुगेको छ । धान खेती गर्ने समयभन्दा करिब एक महिना ढिला गरी डिएपी मल भैरहवा ल्याइएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले झिकाएको पहिलो चरणको डिएपी भारतबाट भैरहवा आइपुगेको हो। यो वर्ष नेपाल आएको यो पहिलो चरण हो। युरिया भने भारतबाट यसअघि पनि ल्याइएको थियो। ...
सरकारले डीएपीको मूल्य बढायो
काठमाडौ, श्रावण १० - सरकारले बुधबारदेखि लागू हुने गरी रासायनिक मल डीएपीको प्रतिकिलोग्राममा ८ रुपैयाँ बढाएको छ । करिब दुई वर्षयता कृषि सामग्री कम्पनीले किसानका सहकारीलाई ३२ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा दिँदै आएकामा बढाएर ४० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । भारतीय बजारमा डीएपीको मूल्य यहाँको दाँजोमा ६ रुपैयाँ बढी ...
बेचिन लागेका तीनजना चेलीको उद्दार
५ साउन, नवलपरासी । भारतमा बेचविखनका लागि लाँदै गरेको अवस्थामा तीन महिलालाई माइती नेपालको टोलीले उद्दार गरेको छ । नवलपरासीको सीमावर्ती महेशपुर हुँदै बेचबिखनका लाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई उद्दार गरिएको हो ।
महिला बेचविखनमा संलग्न... ...
रासायनिक मलको अभाव कायमै
कैलाली, ३ साउन । कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले रासायनिक मलको अभाव भएको बेला त्यसको सट्टा जैविक मल ल्याएको भएपनि उक्त मल बिक्री हुन सकेको छैन ।
कम्पनीले नेपालमा निर्मित उक्त जैविक मल पहिलो पटक २ सय मेट्रिकटन सुदूरपश्चिमको लागि भनेर ल्याए पनि कृषकहरुलाई मल प्रयोगको बारेमा खासै जानकारी नभएको कारण जैविक मल बिक्री हुन नसकेको कृषि सामाग् ...
आधा रातदेखि मलको लाइन
भक्तपुर, असार २९ - दरबार स्क्वायरकी गंगा छुकाले मलको लाइन बसेको चार दिनपछि पाइन् । साँझ खानापछि दैनिकजसो मध्यरातमा मलको लाइन बस्न जान्थिन् । पानी परे पनि मल नभएकैले रोपाइँ गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
बिहान २ बजे मलको लाइन बस्न घरनजिकैको सहकारीमा पुग्थिन् । 'खाना खाएपछि सुत्न छाडेर साढे एकदेखि २ बजेभित्र लाइन बस् ...
चेलिबेटी बेचबिखन गिरोहका नाइकेलाई १७० वर्षको जेल सजाय
चेलिबेटी बेचबिखन गिरोहका नाइके बजिरसिंह तामाङलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले १७० वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको छ। नेपाली चेली भारतमा लगेर बेचको आरोपमा उनी नेपाल प्रहरीले सर्वाधिक खोजी गरिएका व्यक्तिको सूचीमा रहेका थिए। उनी मंसिर १४ गते राजधानीमा पक्राउ परेका थिए। सार्वजनिक अपराध मुद्दामा प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरी परिसर ...
गुणस्तरहीन मल अवैध आयात
सर्लाही, असार २७ - कृषि सामग्री कम्पनीमा रासायनिक मल अभाव भएको मौका छोपेर व्यापारीले भारतबाट गुणस्तरहीन मल अवैध रूपमा ल्याएर महँगोमा बेच्न थालेका छन् । धान खेती लगाउने सिजनमा मलको माग अत्यधिक हुन्छ । खुटौना नाकाबाट गिरोहले गुणस्तर परीक्षण नभएका भारतीय रासायनिक मल दैनिक सयौं क्विन्टल अवैध रूपमा भित्र्याउने गरे ...
प्रधानमन्त्रीलाई रित्तो मलको बोरा र नाम्दो उपहार
२५ असार, नुवाकोट । नेपाली काँग्रेस र नेपाल किसान संघ नुवाकोटले प्रधानमन्त्रीलाई रित्तो मलको बोरा र नाम्लो पठाएका छन् । काँग्रेस जिल्ला सभापति जगदस्श्वरनरसिंह केसीले मंगलबार मलको बोरा र नाम्लो प्रधानमन्त्रीलाई पठाउन निमित्त प्रमुख... ...
सहकारी सदस्य नहुनेलाई मल पाउन सास्ती Jul 09, 2012.
बनेपा, असार २५ (नागरिक)- सरकारले अनुदानको रासायनिक मल सहकारीमार्फत मात्रै विक्री गर्ने व्यवस्था गर्दा सहकारीको सदस्य नबनेका किसानहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ। ...
मलमा अनुदान नीति गलत Jul 05, 2012.
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, असार २१- रासायनिक मलमा माओवादी नेतृत्व सरकारले फेरि अनुदान दिन थालेपछि हरेक वर्ष देशभर अभाव बढ्दै गएको छ। झन्डै १० वर्षको अन्तरपछि मलमा अनुदान दिन थालेपछिको चार वर्षयता बाली लगाउने बेला किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। ...
भारतबाट मल ल्याउन पैसा पुगेन
रकम नभएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले इन्डियन पोटास लिमिटेड(आइपिएल)सँग किन्न लागेको पहिलो चरणको मलसमेत नआउने भएको छ।
रकम नपुग्ने भएपछि मंगलबार आइपिएलसँग ११ हजार टन डिएपी मल किन्ने निर्णय गरेको कम्पनीले पहिलो चरणमा ५ हजार टनमात्र पठाइदिन आग्रह गरेको छ। आइपिएलले पठाएको मूल्यअनुसार पहिलो चरणका लागि नै आवश्यक रकम नपुग्ने भएपछि कम्पनीले मात्रा घटाएर मल प ...
२५ सय टन आइपुग्यो
काठमाडौ, असार १९ - भारतको आसामबाट तीन दिनअघि हिँडेको २ हजार ५ सय टन रासायनिक मल (युरिया) सोमबार दिउँसो वीरगन्ज आइपुगेको छ । कृषि सामग्री संस्थानका अनुसार पहिलो चरणमा भारतबाट ल्याइन लागेको साढे १२ हजार टन मलमध्येको यो पहिलो लट हो । मल आसामको एमएमटीसीबाट मालबाहक रेलले वीरगन्ज नाकामा पुर्‍याएको हो । संस्थाका ...
बाँकेका सहकारी संस्थाले मल तस्करसँग मिलेर जिल्लाका कृषकका लागि पाएको मल दाङ, सुर्खेतलगायत पहाडी जिल्लामा बिक्री गर्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थाले बिक्री गरेको रासायनिक मल ठूलो मात्रामा कम्दी–अगैया हुँदै ट्र ...
मल माग गर्दै किसान आन्दोलनमा Jul 02, 2012.
विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, असार १८- मलको सहज अपूर्ति गर्न माग गर्दै विभिन्न पार्टीका किसान संगठनले संयुक्त अन्दोलन गर्ने भएका छन् । आज दिउसो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बामदेव गोतमले बताए । ...
मल अभावप्रति पूर्व सभासदको चासो Jul 02, 2012.
विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, असार १८- बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएपपछि पूर्व सभासदहरुले मल आपूर्तिको विषयमा कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...
मलका लागि बढ्यो किसानको झन् कहर
काठमाडौँ, असार १७ गते। तीन दिनको पर्खाइपछि काठमाडौँ भैंसेपाटीका जयराम मगरले आइतबार दिउँसो कुलेश्वरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयबाट एक बोरा मल पाए। जयरामले दुई दिनसम्म लाइन बसेर शुक्रबार कुपन पाएका थिए। शुक्रबार कुपन पाएका मगर आइतबार बिहान ६ बजे नै लाइनमा बस्न कुलेश्वरस्थित कम्पनीको कार्यालय आइपुग्दा उनका आँखाले भ्याउने लाइन लागिसकेको थियो। त ...
काठमाडौँ, असार १७-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बाली लगाउने बेलामा मलखादको हाहाकारमा परेका किसानलाई राहत दिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। यशोदादेवी मेमोरियल ट्रस्टले शनिबार गोङ्गबुस्थित मनमैजुमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले धान रोप्ने बेलामा किसानहरु मलखादको मारमा परेका भन्दै उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ...
सहकारी नै मलको चलखेलमा
नेपालगन्ज, असार १५ गते। कृषकहरू रासायनिक मल नपाएर हैरान भइरहेका बेला बाँकेका सहकारी संस्थाहरूले व्यापारीलाई मल बिक्री गर्दै आएको खुलासा भएको छ। कृषकलाई सहुलियत दरमा मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएका बाँकेका विभिन्न सहकारी संस्थाले बाँके र दाङका व्यापारीलाई सहुलियतको मल बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको हो। सहकारी संस्थाले बिक्री गरेको रासायनिक मल ठूलो मात् ...
मधुसुधन गुरागाईं, बनेपा, असार १७ - सरकारी अनुदानमा झिकाइएको झोल मल किन्न किसान अनिइच्छुक देखिएका छन्। पहिलोपटक झोल मल आएको हुँदा उनीहरु त्यसमाथि भर पर्न नसकेका हुन्। 'बोराको रासायनिक मल हाल्दासमेत राम्ररी धान मकै नफल्ने समस्या आइरहेको छ। ...
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार १७ - रासायनिक मल न त खानीबाटै खन्नुपर्छ न त कुनै तत्व मिलाएर बनाउनुपर्छ। बरु सित्तैको हावाबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तो सजिलो उपाय पनि नअपनाउँदा देशभर मलको हाहाकार भइरहेको छ। ...
'संविधान दिएनौ, मल त देऊ’
काठमाडौ, असार १६ - माओवादी 'जनयुद्ध'मा जानुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेता बाबुराम भट्टराईले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । उक्त ४० बुँदे मागपत्रको ३३ नम्बर बँुदामा लेखिएको थियो, 'मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ,' त्यो मागपत्र बुझाउने भ ...
पानी र मल विनाको असार १५
नवराज पथिक । रामेछाप, असार १५ । असारको १५ वित्यो तर रामेछाको धान खेति हुने वेसी भेगमा अझै पानी परेको छैन । पानी नपरेपछि मध्ये रोपाई चलि रहनुपर्ने बेलामा रामेछापका किसानहरु भने फुर्सदीला भएका छन् । जिल्लाका अधिकांस टारहरुमा पानी नपरेका कारण रोपाईा हुन सकेको छैन । त्यस माथि रासयानिक मल नपाएपछि किसानहरुलाई थप चिन्तित बनाएको छ । मन्थली गाविसको मन्थली ...
दान दिवसमा मल अभाव
खाँदबारी, असार १५ - संखुवासभामा बाली हुर्की सके पनि रासायनिक मल नपाएपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन् । मल वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री केन्द्र धनकुटाले मल उपलब्ध नगराए पछि कृषकले मल पाउन नसकेका हुन् ।
कृषकका लागि कृषि विकास कार्यालय संखुवासभाले ४ सय ८५ मेट्रिक टन मल भित्र्याउन ठेक्का आह्वान गरे पनि हाल ३ ...
साता अघिको 'रित्तो' गोदाममा एक्कासि मल
काठमाडौ, असार १५ - मुख्य खाद्यबाली लगाउने बेलामा रासायनिक मल अभाव खेपिरहेका किसानका लागि गत साता कृषि विकास मन्त्रालयले बुधबारदेखि बिहीबारसम्म मल आयत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर पनि मल आएन । कृषि सामग्री लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक शशीराज तुलाधरले बिहीबार रातिसम्म पनि आसामबाट मल आयत हुन नसकेको जानकारी ...
मल र पानी अभावका बीच धान दिवस
‘धानः खाद्य सुरक्षाको लागि वरदान‘ नाराका साथ आज देशभर नवौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव २०६९ मनाइदैं छ। कृषि विकास तथा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले धान दिवस मनाउन थालिएको हो। कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विकास विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को आयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको सहकार्यमा धान दि ...
‘सरकारले मल दिएन, प्रकृतिले पानी‘
नवौं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट तामझाम गरिएको भए पनि धान उत्पादनका हिसाबले दोस्रो ठूलो जिल्ला रूपन्देही र आसपासका किसानहरूको सिंचाईंका लागि आकाश हेर्दै र रसायनिक मलका लागि पसल चाहार्दैमा समय बित्ने गरेको छ। ‘सरकारले त मल दिएन दिएन, प्रकृतिले पनि पानी दिएन‘ टाउकोेमा हात राख्दै निरासा व्यक्त गर्छन् जिल्लाका किसान। विगत केही ...
न पानी पर्‍यो, न मल पाइयो
असार अर्थात् मुरी फलाउन मानो रोप्ने महिना । त्यसमाथि शुक्रबार त असार १५, राष्ट्रिय धान दिवस । दही-चिउरा खाएर रोपाइँमा रमाउनुपर्ने दिन । तर, यसपालि किसानलाई यो दिनले कुनै रौनक ल्याएको छैन । पर्याप्त मनसुनी वर्षा र रासायनिक मल नुहँदा उनीहरू पिरोलिएका छन् । अधिकांश किसानले अझै धान रोप्न पाएका छैनन्, लगाएका बालीहरू मकै र धान/कोदोको बीउ सुकिसक्यो । क ...
रोपाइँ गर्ने समय ...
प्रधानमन्त्रजी गफ हैन मल देऊ!
‘मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ'- संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको चालीस सूत्रीय मागको ३३ नम्बरमा उल्लेख छ। र, माओवादीले योसमेतका माग पूरा नभएकाले बाध्य भएर ‘जनयुद्ध' गर्नुपरेको तर्क त्यतिबेलैदेखि गर्दै आएको छ।
त्यसको १७ वर्षपछ ...
ठग्ने कम्पनीबाटै फेरि मल किन्ने तयारी
काठमाडौं, १४ असार । सार्वजनिक लेखा समितिले कालोसूचीमा राखेको विवादास्पद भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल)बाटै मल किन्ने तयारी सरकारले गरेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासको चेतावनीयुक्त दबाबमा सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
भारतीय दूतावासले आइपिएलबाट मल खरिद नगरे सीमानाकाबाट नेपालमा रासायनिक मल भित्रिन नदिने चेतावनी दिएको स् ...
आधुनिक कृषि प्रणाली, उन्नत बीउ–बीजन र वैज्ञानिक औजार नपाए पनि नेपाली कृषकले सरकारबाट रासायनिक मलको अपेक्षा गरेका थिए । तर, गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि प्रमुख बाली धान रोप्ने बेलामा किसानले मल पाएनन्, जसले गर्दा आगामी वर्ष पनि नेपालले खाद्यान्न संकटको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा मल उत्पादन हुँदैन । रासायनिक मलका लागि पराई मुलुकको म ...
सरकारी निकायले एक अर्कालाई पन्छाउदै निर्णय नगर्दा मुलुकभित्र चरम अभाव भइसक्दा पनि भारतबाट ल्याउने भनिएको ३० हजार टन मल अनिश्चित भएको छ। कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कृषि सचिवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्णय नदिदा भारतबाट ल्याउनुपर्ने मल अनिश्चित भएको हो।
संसदको लेखा समितिले गत चैत ३ गते काल ...
अनुदानको मलमा अनियमितता
सहकारीबाट सस्तोमा खरिद गरी झापा घर भई भक्तपुर-८ सुकुलढोका बस्ने माधव मैनालीले काभ्रे ...
रामेछापको हिलेदेवीका नेमबहादुर दर्नाल बारीका मकै पहेंलिन थालेपछि मलको खोजीमा राजधानी आएको तीन दिन भयो। तीन दिन बित्दा पनि उनले एकमुठी मल पाएका छैनन्। पाउने छनक पनि छैन। राजधानी आउनुअघि रामेछाप र धुलिखेलमा पनि उनले मल खोजे। त्यहाँबाट काठमाडौंमा पाइन्छ भने पनि उनी यहाँ आएका हुन्। 'यो अफिस धाएको पनि दुई दिन भइसक्यो, मल दिने नदिने कुनै अत्तोपत्तो ...
मल अभाव गहिरिए पनि अधिकारीहरु चुपचाप
काठमाडौँ, असार ११ गते। नुवाकोटस्थित आरुखर्कका सानोकान्छा तामाङ र बुद्धिबहादुर तामाङ मकैबालीका लागि रासायनिक मल लिन आइतबार नै काठमाडौँस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमा आइपुगको हुन् तर सोमबार अचानक कम्पनीका कर्मचारीहरूले अब असार १५ पछि मात्र थप मलका लागि नयाँ कुपन वितरण गर्ने भनेपछि तामाङ बन्धु निराश भएर सोमबार घर फर्किएका छन्। तीन/ तीन बोरा मल ...
धान रोप्ने बेलामा मलको हाहाकार
यतिबेला मुलुकमा दुईवटा विषय चर्चाको शिखरमा छ। पहिलो हो सत्ता राजनीति र दोस्रो मल राजनीति। सबैको सरोकारको विषय बनेको सत्ता राजनीतिमा देखापरेको अस्थिरताले कृषिक्षेत्रलाई पुनः एकपटक अन्योलको कालो बादलले घेरेको छ। राज्यको प्राथमिकतामा परेको कृषि क्रान्तिको मुद्दा संविधानसभाको विघटनसँगै भुमरी पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। कृषिप्रधान देश नेपालमा धान लगाउने ...
मलको दीर्घकालीन समाधान
मुख्य खाद्य बाली रोप्ने चटारोले छोपेका बेला नेपाली कृषकहरू रासायनिक मल किन्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । केही महिनाअघि कम तौल भएका रासायनिक मल किन्न विवश भएका कृषकहरूले अहिले रासायनिक मलको चरम अभाव बेहोर्नुपरेको छ । यसको सबैभन्दा बढी मार मध्यमाञ्चल क्षेत्रका पहाडी जिल्ला नुवाकोट, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेलगायतमा परेको छ । यस्तो अभावको अवस्था उ ...
मल आपूर्ति गर्न सरकार असफल
काठमाडौं, ११ असार । मल आपूर्ति गर्न सरकार असफल रहेका कारण मुलुकभर मल अभाव चर्केको छ । १५ असारलाई धान दिवसका रूपमा मनाइने गरे पनि अझसम्म राज्यले मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० असार बितिसक्दा पनि मल आपूर्तिमा चासो नदेखाएका कारण किसान थप अन्योलमा परेका छन् ।
काभ्रेका किसान चक्रकाजी श्रेष्ठले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय निकम्म ...
यस वर्ष ३ अर्ब ४३ करोडको मल
काठमाडौ, असार १० - कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको रासायनिक मल किसानलाई बिक्री गर्नेछ । चालू वर्षका लागि २ कृषि विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको युरिया, डीएपी र पोटास मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मुख्य खाद्यबाली लगाउने सिजनमा मल अभाव देखिएपछि सरकारले लिम ...
काभ्रे, १० असार । काभ्रेमा मागअनुसार रासायनिक मल आपूर्ति हुन नसक्दा अभाव चर्किएको छ । कृषि सामग्री संस्थान धुलिखेल शाखामा कृषकले २ लाख बोरा मल माग गरे पनि ५ हजार ६ सय बोरा मात्रै मल आपूर्ति भएको छ ।
खेतबारीमा मकै लगाउँदा नै मलको माग गरे पनि धान रोप्ने समयसम्म पनि मल पाउन नसकेको गुनासो गरे । मलविनै मकैमा धानचावर फुलेपछि मलका लागि कम्पनीको खातामा जम् ...
बिहीबारबाट रसायनीक मल सर्वसुलभ हुन्छः तुलाधर
९ असार, काठमाडौं । कृषि सामग्री लिमिटेडका निमित्त महाप्रवन्धक शशीराज तुलाधरले आगामि बिहीबारबाट रसायनिक मलको अभाव हट्ने दावी गर्नु भएको छ ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा तुलाधरले शुक्रवारसम्म कुपन पाएका किसानहरुले सोमबारबाट एक- एक बोराको... ...
मल साताभित्रै 'उपलब्ध हुने’
काठमाडौ, असार ८ - मुख्य खाद्यबाली लगाउने सिजनमा अभाव खेपिरहेका किसानलाई ढिलोमा साता दिनभित्र मल उपलब्ध गराउने कृषि विकास मन्त्रालयले बिहीबार बताएको छ । मलसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले किसानलाई मल बिक्री गर्ने सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा कार्यालयमा आउँदो मंगलबारभित्र मल प ...
'संविधान दिन सकेनौ, मल त देऊ!'
रोपाइँको सिजनमा आकाशमा कालो बादल देखेपछि खुसी हुनुपर्ने किसान बुधबार दिउँसो सानागाउँमा निरास मुद्रामा भेटिए। बेलामा मल नपाएपछि उनीहरूलाई यसपटक बाली बिग्रने चिन्ताले सताएको छ। 'पानी परेर मात्र के गर्ने,' सानागाउँका ७२ वर्षे बासुदेव महर्जनले भने, 'मल हाल्न नपाए बाली सप्रँदैन।' चार रोपनी खेतमा धान रोपेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका उनले उत्पादन क ...
मल अभावको अर्थ-राजनीति
देशमा जेठ १४ पछि बाबुराम भट्टराईको कामचलाउ सरकार कायम छ । बाबुराममजीकै दलभित्रको महत्वपूर्ण विचार समूह उनको नेतृत्व मान्न तयार छैन र अब फुटिसकेको छ । त्यस्तै दृष्टिकोण अन्य दलहरूको पनि रहेको छ । तर यो तर्क स्वीकार गर्न प्रचण्ड-बाबुराम टोली तयार छैन । यो अन्योलले भविष्यमा अझ बढी तनाव र अराजकतातिर राष्ट्रलाई धकेल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यो स्थितिल ...
चेलिबेटी बेच्ने जेल पर्दा पनि पीडित त्रसित
चौतारा, असार ६ - जेलबाट त निस्कउँ तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । एक-दुई दिनमा छुट्दैछु, सबैलाई सिध्याउँछु । पटकपटक गरी ६ जना चेली भारतीय वेश्यालयमा बेचेको आरोपी बजिरसिंह तामाङले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत परिसरमा भने, 'मेराविरुद्ध बयान दिने सबैलाई ठीक पार्न जानेको छु ।' उनले आफैंद्वारा बेचिएका चेलीहरूलाई औंला ...
धान रोप्ने र मकै गोड्ने सिजनले किसानहरूलाई भ्याई नभ्याई चटारो छ । त्यहीमाथि दिनहुँ धाउँदा पनि रासायनिक मल नपाइएपछि उनीहरू नराम्ररी पिरोलिएका छन् । सरकारले भने मलको हाहाकार हटाउन कुनै तत्परता देखाएको छैन । बरु कृषि सामग्री कम्पनीले बीस दिनयता मल उपलब्ध नहुने जनाएको छ । कृषि मन्त्रालय स्रोतले मल खरिद प्रक्रिया नै अन्योलमा रहेकाले यो सिजनमा मल आउने सम ...
भारतीय मलको तस्करी तीव्र
वीरगन्ज, अषाढ ३ - प्रहरी-प्रशासनको मिलेमतोमा मध्य तराईको पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका सीमाक्षेत्रबाट भारतीय रासायनिक मलको ठूलो परिमाणमा तस्करी भइरहेको छ । कृषकलाई सुविधा पुर्‍याउनेभन्दा केही तस्कर र प्रहरी प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीले तस्करीबाट फाइदा लिएका छन् । प्रशासनले कृषकलाई फाइदा पुग्ने भन्दै आँखा चिम्लिएको छ ...
नेपालमा मल भित्रिने वैकल्पिक मार्गका रूपमा चीनबाट मल भित्र्याउनेबारे हामी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छौँ ...
भारतबाट आएको पुगेन, चीनबाट मल झिकाउने तयारी
काठमाडौँ, जेठ २९- कृषि विकास मन्त्रालयले चीनबाट पनि कृषि मल झिकाउने तयारी गरेको छ। ...
आजभोलि सबै मान्छेको हातमा मोबाइल देखिन्छ। मोबाइलले सूचना क्रान्तिमात्र हैन, चेलिबेटी बेचबिखनमा पनि ‘क्रान्ति’ नै गरिरहेको रहेछ। मोबाइल फोनले दलाललाई अपरिचित युवतीसित हिमचिम बढाउन मात्र होइन भनेको समय र स्थानमा अति गोप्य तरिकाबाट बोलाउन, भेट्न पनि सहयोग गर्दोरहेछ। छोटो समयमा अपरिचित मान्छेले फोन गर्ने, नाता जोड्ने, भेटघाट गर्ने र राम्रो ...